Figma: Design, Prototype, na Imekota Aka na Ntanetị | Martech Zone
Ọnwa ole na ole gara aga, anọ m na-enyere aka ịzụlite na ijikọ ihe atụ WordPress maka ahaziri ndị ahịa. Ọ bụ ezigbo nhazi, ịgbatị WordPress site na ngalaba ahaziri iche, ụdị post post, usoro nhazi, isiokwu ụmụaka, yana plugins omenala.
Akụkụ siri ike bụ na m na-eme ya site na ịkwa emo sitere na ikpo okwu prototyping. Ọ bụ ezie na ọ bụ ikpo okwu siri ike maka nyocha na imepụta ihe, ọ naghị adị mfe ịtụgharị na HTML5 na CSS3. Tinye ihe omuma ndi ozo, ma ubochi m di ezigbo iwe na oganihu nwayọ nwayọ.
Otu ihe mgbagwoju anya bụ na ụlọ ọrụ na-emepụta ngwa ngwa nyefere ihe ngosi ahụ, na-enweghị ụdị ụdị usoro ọmụmụ ọ bụla… yabụ anyị na-arụ ọrụ iji mezuo nke ahụ site na mbupụ prototypes n'ime airship, wee sụgharịa CSS na WordPress. Ọnụ ọgụgụ nke usoro dị mkpa na ọdịiche dị n'etiti nyiwe na-eme ka ọ bụrụ usoro siri ike. Tohapụ ikwu ịgbalị ịdị mgbagwoju anya maka ọsọ na scalability
Ihe ngosi na-eme ka ọtụtụ n'ime ọrụ a nwee ikpo okwu nke na-enyere imewe, nzaghachi, na mmekorita aka na onye ọ bụla so na ndị otu gị, gụnyere:
Ndị na-emepụta ihe - Imekota na onodu na ozugbo. Echegbula onwe gị maka faịlụ gị ọ bụrụla ụbọchị ma ọ bụ dechaa ọrụ ibe gị.
Ndị na-akwado ya - Ziga njikọ iji kpokọta nzaghachi, nweta arịrịọ mgbanwe, ma kwe ka ndị nwere oke mee ka mmelite oyiri na atụmatụ gị.
Developers - Ndị Injinia nwere ohere ịnweta isi iyi nke eziokwu ugbu a ma nwee ike inyocha ihe, akụ mbupụ, na koodu nnomi.
Figma nwere ụfọdụ Unique Atụmatụ:
Ọrụ Boolean - Site na usoro anọ: njikọta, iwepu, ibelata, ma wepu, ị nwere ike ijikọ ụdị ụdị ọdịdị ọ bụla na nkenke.
components - Mee ngwa ngwa na karia mgbe niile site na iji reusable na scalable ihe gafee faịlụ gi. Access n'ígwé na onye ọ bụla atụ otú i nwere ike intuitively dezie ma kpagbuo ederede na ihe oyiyi inline.
Nsogbu - Nyochaa atụmatụ gị ka ọ dabara nha ihuenyo ọ bụla site na ịdozi ihe na ntọala nne na nna, ịbịnye ihe na ntanetị, ma ọ bụ ọbụna site na ịmepụta ihe nha.
Mbadamba Ngwaọrụ - Wepụta atụmatụ gị na gburugburu ebe obibi dị mma. Nwere ike ịhọrọ n'etiti eserese na ọnọdụ ihu igwe.
mmekọrịta - Mee ka ihe ngosi gị dị ndụ site na ịkọwa mmekọrịta gị na pịa, ka ị na-adagharị, na ịpị, na ndị ọzọ.
Nkwụsị - Na ikwu na iji aka n'ọnọdu i nwere zuru achịkwa ebe na otú overlays-egosi.
Pixel-izu okè - Nhazi mmekorita 60fps na-ewetara gị ultra crisp, nyocha zuru oke na pikselụ.
Prototyping - Mee ngwa ngwa na-asọpụta site na ijikọ ihuenyo na ịgbakwunye na ihe ndị dị ka mmekọrịta, ntụgharị, overlays, na ndị ọzọ. Kama ịmekọrịta na ngwaọrụ ndị ọzọ naanị ịkekọrịta URL iji nweta nzaghachi.
Nwepụta na-eme mgbanwe - Ghaa nhazi gị ma hụ otu ha ga-esi meghachi omume na nha ihuenyo.
Inggbanye - Kwado uzo, uzo, ma obu uzo obula na-agagharị n'ime ụdị onye ọ bụla ma ọ bụ nne na nna niile.
Nye - Mekọrịta agba, ederede, grids na mmetụta gafee ọrụ gị niile. Nọgide na-enwe usoro ederede dị ole ma dozie atụmatụ gị n'ofe ngwaọrụ dị iche iche na ụdị ntanetị pụrụ iche nke Figma.
Otu Ọba akwụkwọ - Kekọrịta akụrụngwa na ụdị na Figma-enweghị mkpa maka ịkekọrịta draịva ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ. Gị na ndị otu gị na-ejikwa otu na mgbe mgbanwe gbanwere site na iji usoro ibipụta akwụkwọ dị mfe.
Netwọk Vector - Figma mepụtara ngwa ọrụ mkpịsị akwụkwọ ka ọ bụrụ nghọta, na-enye ohere maka ịme ihe nzizi ka ọ na-echekwa azụ-ndakọrịta na ụzọ.
n'ihi na enterprise ndị ahịa, Figma nwere ike ịchụpụ agbanwe agbanwe, arụmọrụ, yana nchekwa n'ọtụtụ. Ikpo okwu na-enyere ndị ụlọ ọrụ aka ijikwa sistemụ ịme ngwa ngwa yana ọba akwụkwọ otu yana ikike ibugo na kesaa ụdị edemede ederede n'ofe nzukọ gị. Ntinye Aka Naanị, Njikwa nnweta, na ndekọ ndekọ gụnyere.
Bido na Figma
Figma nwere oke nhọrọ nke nkuzi ha na-edobe na ha Youtube, nke a bụ vidiyo Ibido:
Ihe ngosi na-enye ndị mmepe ikike inyocha, detuo, mbupụ akụ, ma detuo CSS ozugbo site na faịlụ okike. I nwekwara ike ime ka usoro ọrụ gị dị ugbu a na njikọta, gụnyere airship, Avocode, Jira, Dropbox, ProtoPie, na Ụkpụrụ maka Mac. Ha nwekwara API siri ike.
Gbalịa Figma n'efu
Tags: nkpuruimekotadesignimewe mmekotaimewe mockupsDropboxfigmaJiraUchechingwanrọprototypeprototype mmekotaanyaZeppelin
Infographic: Senior Citizen Mobile na Ntanetị Internetntanetị